GUI MODE & TEXT MODE အကြောင်းရှင်းပြပေးပါ ခင်ဗျာ။ - MYSTERY ZILLION
GUI MODE & TEXT MODE အကြောင်းရှင်းပြပေးပါ ခင်ဗျာ။
April 2011 edited April 2011 in Programming
ကျွန်တော်က စာဖတ်ရင်း သင်တန်းနည်းနည်းတက်ရင်း လေ့လာနေသူမို့ မရှင်းတာကိုမေးခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။
အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကို low level language တွေဖြစ်တဲ့ machine နဲ့ assembly တွေ high level language တွေ ဆက်စပ်ပြီး ရှင်းပြပေးပါခင်ဗျာ။
ဖိုရမ်ကတော့ပစ်တွေကို အချိန်ရတိုင်းစုံအောင် ဖတ်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်။ ရှင်းပြပြီးသားရှိရင်လည်း ညွှန်ပေးပါခင်ဗျာ။
တော့ပစ်ဖောင်းပွ သွားရင် ခွင့်လွှတ်ပါ။
ဘယ်လိုမျိုး သိချင်တယ်ဆိုတာ အသေအချာပြန်မေးပါ ကိုယ်သိထားတဲ့ ဥပမာတစ်ခုခုပြောခဲ့ပါ အခုကဘာဖြေရမှန်းမသိ ဖြစ်နေတယ်။
CalmHill wrote: »
ဟုတ်ကဲ့။ ဒီလိုပါခင်ဗျာ။ low level language ဖြစ်တဲ့ machine နဲ့ assembly အပြင် c နဲ့ c++ တွေမှာ text mode ပဲ သုံးနိုင်ပြီးတော့ အဲ့ဒီနောက်ပေါ်တဲ့ languages တွေမှာ GUI mode သုံးလာတယ်လို့ စာထဲမှာ ဖတ်ရလို့ပါ။ ဘာကြောင့် text mode ပဲသုံးနိုင်တာလဲ။ text mode ဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးသုံးရတာလဲ။ C နဲ့ C++ တွေမှာ ဘာလို့ GUI mode မသုံးနိုင်ရတာလဲ ။ GUI mode ဆိုတာရော ဘယ်လိုမျိုးလဲ ဆိုတာ တကယ်သိချင်လို့ပါခင်ဗျာ။
ကျွန်တော်သိထားတာ မှားနေရင်လည်း ပြင်ပေးပါခင်ဗျာ။ တကယ်မသိလို့ မေးမြန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
soe372 wrote: »
ကျွန်တော်လည်းသိသလောက်ပြောကြည့်မယ်။ မှားနေရင်ပြင်ပေးကြပါ။ C နဲ့C++ ဟာ Low level language မဟုတ်ပါဘူး။ High Level Language ပါ။ Assembly နဲ့Machine code ကတော့ Low level language ပါ။ အသေးစိတ်ကိုအောက်ကလင့်မှာဆွေးနွေးထားတာကိုတွေ ့ရပါမယ်။
text mode ဆိုတာကတော့ CLI (Command Line Interface) ကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါမယ်။ ဘာကို ဆိုလိုတာလဲဆိုတော့ အရင်တုံး console တစ်ခုထဲ ဥပမာ cmd လို command ရိုက်ပြီးသုံးခဲ့ရပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ GUI ပေါ်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာ CLI တွေအသုံးပြုတာနည်းသွားပါတယ်။ လိုအပ်ရင်တော့ အသုံးပြုရတုံးပါပဲ။ GUI ဆိုတာကတော့ ကျွန်တော်တို့လောလောလတ်လတ် ကွန်ပျုတာတွေ အားလုံးဖွင့်လိုက်ရရင် မြင်တဲ့ အရာအားလုံး command line တွေမှလွဲလို့ကျန်တာဟာ GUI ပါပဲ။ သို ့သော် အခု window က cmd ဟာလည်း CLI အစစ်မဟုတ်
ဖြစ်နိုင်တာတစ်ခုက ဖတ်နေတဲ့စာအုပ်က အတော်လေး ဟောင်းနေပုံရတယ်။ အရင်ကတော့ C, C++ တို့မှာ Mode ၂ မျိုးနဲ့ အလုပ်လုပ်ကြပါတယ် ပထမတစ်ခုက Text Mode ပါ နောက်တစ်ခု Graphic Mode ပါ။ Text Mode မှာက ဘာတွေလုပ်လို့ရသလဲဆိုတော့ ASCII Character0to 255 အထိကို သုံးလို့ရပါတယ်။ Graphic Mode မှာကတော့ VGA, CGA, EGA စသည်ဖြင့် ပြောင်းပြီး Character တွေအပြင် Graphical component တွေ Circle, Line စသည်ဖြင့် ဆွဲလို့ရတယ်ပေါ့လေ။ အဲဒါကို GUI လို့မှားဖတ်တာဖြစ်မှာပါ။
GUI ဆိုတာကတော့ Text ပဲဖြစ်ဖြစ် Graphic ပဲဖြစ်ဖြစ် ပါနိုင်တာပါပဲ။ အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ GUI ဟာ Program အလုပ်လုပ်မယ့် Platform အပေါ်မှာမူတည်ပါတယ် အရင်ကလို ကိုယ်တိုင်လုပ်စရာမလိုပါဘူး အဲဒါကြောင့်ဘယ် Language ကဖြင့် GUI ရတယ် ဘယ်ဟာကဖြင့် မရဘူးရယ်မဟုတ်ပါဘူး တကယ်ကတော့ Platform Dependent Library တွေကို လှမ်းခေါ်လို့ ရမရအပေါ်ပဲမူတည်ပါတယ်။
Machine Language ဆိုတာက Processor ရဲ့ Instruction Set တွေပါ အဲဒါကိုသုံးပြီး အလုပ်လုပ်ကြတာပါ အဲဒါကြောင့် Machine Language မှာမရဘူး မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာ မရှိပါဘူး Machine Language နဲ့မှမလုပ်နိုင်ရင် တစ်ခြား Language နဲ့လည်း လုပ်လို့မရတော့ပါဘူး။ Assembly ဆိုတာကလည်း ပြောမယ်ဆိုရင် Machine Language ပါပဲ ဘာတစ်ခုပဲကွာလဲဆိုတော့ Numeric Instruction တွေကို Mnemonics နဲ့အစားထိုးရုံပါပဲ အဲဒါကြောင့် သူနဲ့လုပ်မရဘူးဆိုတာလည်းမရှိပါဘူး။
အောက်မှာ နမူနာပြထားတဲ့ Assembly ကို Run ကြည့်ပါ Windows Messagebox တစ်ခုပေါ်ပေါ်လို့ရပါတယ်။ သူလည်း Windows Library ကိုလှမး်ခေါ်လို့ လုပ်နိုင်တာပါ ထိုနည်းတူစွာပဲ အခြားသော C, C++, Pascal, .... အဲဒါတွေလည်း Window Library ကိုခေါ်လိုက်ရင် Messagebox ပေါ်ပေးမှာပါပဲ။ Linux မှာဆိုရင်လည်း အတူတူပါပဲ သက်ဆိုင်ရာ XWindow Functions တွေကို ခေါ်နိုင်ရင် သက်ဆိုင်ရာ GUI တွေကိုရမှာပါပဲ။
MsgBoxCaption	db "Hello!",0
MsgBoxText	db "MessageBox from Assembly!",0
invoke MessageBox, NULL, addr MsgBoxText, addr MsgBoxCaption, MB_ICONINFORMATION OR MB_OK
အပေါ်မှာ Morris ပြောသွားတာလည်းရှိတယ် တစ်ခုထည့်ပြောချင်တာက Interface ဆိုတာ Command နဲ့အလုပ်လုပ်ရင် Command Line Interface ပါပဲ အတုရယ်အစစ်ရယ်မရှိပါဘူး တော်ကြာနေရင် ဘယ်ဟာက GUI အစစ်ဖြစ်ပြီး ဘယ်ဟာကအတုဖြစ်သလဲ ထပ်မေးနေရင် အကုန်လုံးဖြေရခက်မယ်။ Windows Command Line ရယ်မဟုတ်ပါဘူး MatLab လိုဟာတွေလည်း Command Line Interface လို့ပဲပြောရမှာပါ Graphical Presentation Tools တွေလည်းပါတာပေါ့။ စာမရေးတာကြာပါပြီ ပျင်းလို့ရှည်ရှည်လျားလျားရေးသွားတယ်။